Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal विदेशी मुद्राको विनिमयदर: आज कुन देशको कति ? - Pnpkhabar.com
विदेशी मुद्राको विनिमयदर: आज कुन देशको कति ?
काठमाडौँ, ८ असोज : साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार आज नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ उकालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रिदर १४२ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ।